Imisebenzi yezandla kunye nekhadibhodi - Imisebenzi yezandla | Imisebenzi yezandla (Iphepha 2)
Fumana indlela yokwenza iintolo ezikrelekrele ngemathiriyeli elula njengeendiza kunye nekhadibhodi. Baya kuba sisipho esithandekayo kakhulu.
Ngekhadibhodi sinokwenza ibhokisi yoqobo egcwele iibhokisi ukuze ukwazi ukunika izinto ezothusayo ezincinci ngoSuku lweValentine.
umthi wekhephu kunye neediski zomqhaphu
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona indlela yokwenza lo mthi unekhephu ngeediski zomqhaphu...
Amabhabhathane ahlekisayo enziwe ngekhadibhodi kunye nekhadibhodi
Ungaphoswa ukwenza amabhabhathane alula kakhulu ngeetyhubhu zekhadibhodi ezisetyenzisiweyo kunye nezinto ezilula ezifana nekhadibhodi kunye neepompom.
15 lula kwaye kumnandi iphepha roll yezandla
Hlaziya imiqulu yephepha engenanto onayo ejikeleze indlu kwaye wonwabe ngale miqulu yephepha eyi-15 elula kwaye enemibala.
Amadoda amathathu azizilumko ukuba azalise ngeelekese
Ungaphoswa yindlela yokwenza amadoda ethu athandekayo aZilumko eziThathu ngeetyhubhu zekhadibhodi ezisetyenzisiweyo kwaye zikwazi ukuzalisa ngeelekese.
Ukuba uthanda umsebenzi wezandla owonwabisayo, nazi iivampires ezonwabileyo zale Halloween ukuba zonwabele ngeetshokholethi.
Kule mihla yeHalloween sinokwenza lo msebenzi wobugcisa oza kuba ngohlobo lomdlalo. Ezi glasi zokugibisela ibhola zifanelekile ...
Molweni nonke! Kwinqaku lanamhlanje siza kubona ubugcisa beekhadibhodi ezintlanu esinokuzenza nge ...
Molweni nonke! Kwinqaku lanamhlanje siza kubona ukuba zenziwa njani iintlobo ezahlukeneyo zezilwanyana ezi ...
Molweni nonke! Kwizinto zobugcisa zanamhlanje siza kuzenza ezi zihombo zilula ngeentonga zobugcisa kunye nekhadibhodi….
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza le powusta ukuba ibeke kwiqhina le ...
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona indlela yokwenza i-spyglass yokudlala iipirate ...
Ngaba ujonge ubugcisa obunamaphepha alula ukwenza kunye nentsusa? Ungaphoswa zezi zimvo zingama-20 ziyakumangalisa.
Amanani asi-7 enziwe ngeebhokisi zeqanda
Molweni nonke! Namhlanje sikuphathele izinto zobugcisa ezilula nezintle kakhulu ozenza ngeebhokisi zeqanda….
I-7 yamakhadibhodi emifanekiso ekufuneka yenziwe kwiiyure ezishushu
Molweni nonke! Namhlanje sikulethela izimvo ezi-7 zamanani ezenziweyo kunye nekhadibhodi kwaye iya kuba mnandi kakhulu ...
Iinyawo zeDinosaur izihlangu
Fumanisa ukuba iibhokisi zekhadibhodi ezilula zezicubu ungenza njani izihlangu zoqobo ezimile njengeenyawo zedayinaso.
Isongelo esikhulu seelekese
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona indlela yokwenza isongelo esimile njengeelekese ...
Obu bugcisa bubonisa indlela yokwenza ibhokisi yekhadibhodi enezinto zokudlala ezimnandi zekati yakho. Uya kuyithanda indawo yakho yokudlala.
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje sikuphathela indlela entsha yokuphinda usebenzise iibhokisi zeroli ...
Ikhadi lokubulisa ukunika
Ngaleli khadi lokuvuyisana nawo nawuphi na umsitho ungothuka ngelixa usenza isipho esenzelwe wena ukuba wonke umntu asithande
Fumanisa ukuba ungayenza njani le pendant ifana nomnyama ukuze abantwana bonwabe. Yoqobo ukuhombisa naliphi na ikona
Umvundla wekhadibhodi elula
Molweni nonke! Sikwinyanga yePasika, kwaye nangona sele idlulile, yeyiphi engcono kunokwenza ubugcisa ...
Ikhadibhodi yentlanzi eyenziwe ngokutsha
Funda indlela yokwenza ezinye iintlanzi ezintle kwikhadibhodi ehlaziyiweyo. Ngekhadibhodi encinci, ubuchule kunye nepeyinti uya kuba nale mveliso yobugcisa.
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona indlela yokwenza inyoka kunye nekhadibhodi ye ...
Umbungu olula wabantwana abaneebhokisi zeqanda
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona ukuba siyenza njani le mibungu ihlekisayo yabantwana, ke ...
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona indlela yokwenza le bhere ye-polar ngendlela elula nge ...
5 yeqanda ibhokisi yezandla
Molweni nonke! Kwinqaku lanamhlanje siza kukunika imibono emihlanu yokwenza ubugcisa ngekhadibhodi ...
Iimaski zoqobo zeCarnival
Sinendlela eyahlukileyo yokwenza ubugcisa bemaski yobugcisa. Uyakuthanda ukuba kukhawuleze kangakanani, kwasekuqaleni kwaye kulula ukwenza.
Imouse enekomityi yeqanda
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona indlela yokwenza le mpuku ihlekisayo kunye nekhadibhodi ...
Inkxaso yokudlala amakhadi
Sivelise umnini wekhadi ukuze abancinci babambe kakuhle kwaye babonakale ukudlala lo mdlalo wokuzonwabisa.
Le pendenti emilise ikati yeyona ndlela yoqobo yokuhombisa naliphi na ibhegi okanye ukuyiphatha njengesitshixo.
Ungaphuthelwa yile mveliso elula yokwenza umhlobiso ocolileyo we-reindeer ukuhlobisa ikhaya lakho nomoya weKrisimesi.
Sikubonisa ukuba ungayenza njani le hedgehogs eyonwabileyo eyenziwe ngeepompom zoboya kunye nekhadibhodi encinci. Bahlekisa kakhulu kwaye bayile abantwana
Izihlangu zekhadibhodi yokufunda ukubopha izihlangu
Le mveliso kulula kakhulu ukuyenza kwaye ikwalungele abantwana abafundayo ...
Le khadibhodi yezobugcisa ilungele ukusebenza ngeemvakalelo, ngekhe uyiphose! Abantwana baya kuthanda ...
Iiwotshi zokufunda iiyure ngendlela emnandi nabantwana
Ungaphuthelwa yile mveliso ukuze abantwana bakho bafunde iiyure ngendlela eyonwabisayo kunye nolwaneliseko lokwenza izinto ngokwabo.
Ungaphuthelwa yile mveliso yesithsaba esimnandi oya kuthanda ukuyenza nabantwana bakho, baya kuba nexesha elimnandi!
Umdlalo ukufunda amanani
Sinofudo oluhlekisayo kakhulu lwekhadibhodi. Olu hlobo lobugcisa lwenziwe ukwenzela ukuba abantwana ...
Ubugcisa bokufunda utolo
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje sikulethela obunye ubugcisa bokufunda apho ...
Ungaphoswa yile mveliso yobugcisa ifanelekileyo yokwenza kunye nekhadibhodi esongwayo yephepha langasese. Kumnandi kwaye kuluncedo kakhulu kubantwana.
Imisebenzi yobugcisa emi-5 enamavili ephepha langasese
Molweni nonke! Kwinqaku lanamhlanje siza kukufundisa imisebenzi yezandla e-5 onokuyenza ngokurisayikilisha ikhadibhodi ...
Iikhadibhodi ezihombisayo ezinemitya
Ungaphoswa ngoonobumba bokwenza ubugcisa, ufuna kuphela imitya enemibala, kwaye iya kuba ziileta ezintle!
Ukuba uthanda ukufunda nokumakisha amaphepha akho, unokwenza ezi zibhukumaki zimiliselwe kwi-cactus. Zinemilo emyoli yeencwadi zakho
Ubugcisa bokufunda ukubopha imitya yezihlangu
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza obunye ubugcisa bokufunda, kule meko ukuze sifunde ...
Ikhava yenqaku lePuppy
Ngolu bugcisa unokwenza ikhava yencwadana yakho enobuso bepuppy. Yiba nesibindi sokuyila njengoko ineziphumo ezivelelayo.
Iibinoculars ezinephepha lephepha langasese elinemiqolomba ngakumbi
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza iibinoculars kwimisongo yephepha langasese, elungele ...
Intyatyambo ehombisayo enemiqulu yamaphepha angasese
Molweni nonke! Ngenye imini sikuzisela ubugcisa bokurisayikilisha. Makhe sibone indlela yokwenza le ntyatyambo yokuhombisa ...
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza le bhukumaki intle imile yeti-….
Ikheji ehonjisiweyo yokuhombisa iitafile
Obu bubugcisa obulula ukuba ubenze ekhaya ngezixhobo zokuqala. Yindlwana ...
Ibhasikithi ephothiweyo enebhokisi yekhadibhodi
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza le bhaskiti intle yalukwa njenge-wicker nge ...
Itafile yesiqhelo ngaphambi kokuba ulale
Ngale tafile yesiqhelo yabantwana, unokwenza abantwana bakho balandele imisebenzi emincinci ngaphambi kokuba balale kwaye ngendlela emnandi.
Umlingo wand no-Eva Rubber okanye ikhadibhodi
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kuyenza le wand yomlingo ngerabha ye-eva, ilungele ...
Qonda ukwahlula ngobugcisa
Molweni nonke! Namhlanje siza kwenza lo msebenzi wobugcisa uluncedo ukuqonda ulwahlulo ngendlela elula, iyakunceda ...
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza ukutya kweentaka, kulula kakhulu kwaye ...
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza indlovu ngemiqulu yamaphepha yangasese, kakhulu ...
Inkukhu igcina ikhadibhodi iqanda # quédateencasa
Ungaphoswa lolu hlobo lobugcisa besikhukukazi sikhusela iqanda, elenziwe ngekhadibhodi yekomityi yeqanda ... kulula kakhulu kwaye iyasebenza.
Ubugcisa obunamaphepha asendlini yangasese ukuze usebenze amanani # ahlala ekhaya
Obu bugcisa bulungele abantwana ukuba basebenze kumanani kwaye bakonwabele ukudlala nomdlalo owenziwe ngokwabo.
Izimvo zepasika zokugcwalisa iilekese
Kubugcisa banamhlanje sinemibono emangalisayo yokwenza ngePasika. Ityhubhu yekhadibhodi emile njengomvundla kunye nengxowa ebume be-turkey.
Imisebenzi yezandla yabantwana: i-fly swatter ukudlala # ukuhlala ekhaya
Ungaphuthelwa yile mveliso yabantwana, ngokungathandabuzekiyo bubugcisa obonwabisayo bokuvalelwa, # hlala ekhaya.
Ipopi yenja okanye ezinye izilwanyana zokwenza nabantwana #yomequedoencasa
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kuyenza le popu yenja emnandi ukuba ichithe imvakwemini yokonwabisa ...
Ubugcisa babantwana eluvalelweni: ukupeyinta iinzipho #yomequedoencasa
Ungaphuthelwa yile mveliso yabantwana eluvalelweni, ukupeyinta isikhonkwane kuhlala kumnandi! Khumbula, # hlala ekhaya
2 iimaski ezihlekisayo zeCarnival
Umsebenzi wobugcisa omnandi kakhulu wokuwenza nabantwana. Ziziimaski ezimbini ezinemilo eyonwabisayo ukuze zisetyenziswe kwimibutho yakho yesinxibo.
Indlela yokwenza ikhadi Pop Up
Ukuba ufuna ukufunda indlela yokwenza ikhadi elimnandi lePop Up, nantsi le ndlela yoqobo yokunika eli khadi ngendlela evuya kakhulu.
Ikhalenda yeAdvent yeKrisimesi
Ngale Krisimesi singenza ikhalenda yokufika kamnandi yabantwana, eyenziwe ngeetyhubhu zekhadibhodi ezenziwe ngokutsha.
Abenzi bekhadibhodi abenziwe ntsha kwiselfowuni
Sineendlela ezintathu zokurisayikilisha ngeetyhubhu ezincinci ezimnyama kunye ezimhlophe zekhadibhodi. Singazifumana kwaye sizifumane ...
Igubungela iimitha zombane
Kwiminyango yezindlu kuhlala kukho iimitha zombane ezingathandekiyo. Siza kwenza ikhava yemitha elula ukuyisombulula
Isitampu esimile esenziwe ngentliziyo
Esi sitampu similise intliziyo kulula kakhulu ukusenza nabantwana kwaye baya kuba nexesha elimnandi bayenze kwaye babone iziphumo.
Craft ibhokisi yobuncwane
Ibhokisi yokwenza nabantwana kule holide. Bayakuchukunyiswa yinto yokuba banokugcina ubuncwane babo. Yenziwe ngezinto ezilula kakhulu kwaye ezingabizi.
Ezi nyoka zilula kakhulu ukuzenza kwaye abantwana bayasithanda isiphumo. Unokwenza uninzi njengoko ufuna! Sele unazo izinto zokwakha?
Ikhadibhodi ejikelezayo kunye nephepha lokujikeleza, kumnandi kakhulu!
Abantwana bayakuthanda ukwenza iithoyi zabo kwaye ngoku banokwenza ujikeleziso lwesipina abaya kuluthanda! Kulula kakhulu kwaye kumnandi.
Isakhelo sefoto ngePole Sticks yeePolaroid Photographs
Ungaphoswa yile DIY Polaroid Photo Frame ngePopsicle Sticks ... kulula kakhulu ukuzenza kwaye zikhangeleka zintle!
Ukuphinda usebenzise kwakhona iihanger zokuhombisa igumbi losana
Igumbi lomntwana yindawo ekufuneka ibe intle kwaye ikhululekile ukufumana usana olusandul 'ukuzalwa. Kule posi ndiza kukufundisa indlela yokwenza u-Funda ukwenza le powusta enegama lomntwana ukuhombisa igumbi lomntwana wakho ngokurisayikilisha iimpahla ezixhonyiweyo.
IKAWAII ICE CREAM EBUMBILEYO KWINCWADI YENCWADI-INYATHELO NGENYATHELO
Kule tutorial ndikubonisa ukuba ungayenza njani incwadana enemilo ye-kawaii ice cream. Yenziwe ngezinto ezisisiseko zobugcisa kwaye igqibelele ukunika umntwana okanye ukwenza nayo. Ke hlala, okwangoku ndikubonisa izixhobo ozifunayo kunye nesinyathelo ngenyathelo ukuze uzenzele ngokwakho.
Uyenza njani ikati elimnyama ngeHalloween, kumnandi ukuyenza kwaye uyisebenzise kuba emva koko ungayisebenzisa ukuhombisa okanye ukudlala nayo.
Uyenza njani intaka yerabha ye-eva ngezinto ezinokuphinda zisetyenziswe
Funda ukuba ungayenza njani le ntaka yerabha ngokurisayikilisha kwakhona izindlu zangasese okanye iphepha lasekhitshini, elungele ukuhombisa nayiphi na ikona yendlu yakho.
Ifowuni ephethe umnxeba eyenziwe ngeekhowudi zekhadibhodi
Funda ukuba ungayenza njani le nkxaso yomnyama yeselfowuni yakho eyenziwe ngeekhadibhodi ezinemiqolo elungileyo yokubeka iselfowuni kwidesika yakho
Iileta zekhadibhodi ukuhombisa igumbi lakho okanye idesika
Funda ukuba ungazenza njani ezi leta zekhadibhodi zilungele ukuhombisa igumbi lakho okanye nayiphi na ikona yendlu yakho kwaye uyinike umnxeba okhethekileyo.
Uyenza njani ifreyimu yefotocall
Ndikubonisa indlela yokwenza isakhelo sefotocall kwaye ngamanyathelo amathathu nje uyakulunga. Ngokuqinisekileyo ukubetha kwiqela.
Uyenza njani umnini wefowuni ephethe imo yecookie kawaii - INYATHELO NGENYATHELO
Kule tutorial ndikubonisa ukuba uyile njani umnini wefowuni ephathekayo emile njengecookie kawaii. Uphumla iselfowuni yakho ngelixa uhombisa ngecookie enkulu yekawaii.
Izithsaba zemihla yokuzalwa yabantwana
Akukho nto intle njengokuchitha imva kwemini udlala nabantwana, ke namhlanje sikuphathela umbono wokuqala, indlela yokwenza izithsaba ezincinci zemihla yokuzalwa yabantwana
Kule mveliso siza kubona indlela yokwenza intliziyo ehonjisiwe kwisiseko sekhadibhodi.
Ibhabhathane elinemiqolo yephepha langasese
Funda ngendlela yokusebenzisa kwakhona imiqulu yamaphepha endlu yangasese kwaye uyijike ibe leli bhabhathane elihle
Uyenza njani i-tic-tac-toe elula kwaye engabizi kakhulu
Kule tutorial ndikubonisa ukuba uyenza njani ibhodi enee-tile kwenye yezona midlalo zidumileyo zebhodi, i-tic-tac-toe. Yila njengoko uthanda kakhulu.
Isakhelo sefoto yekhadibhodi yeRetro
Funda indlela yokwenza isakhelo sefoto se-retro esiya kugcwalisa ikhaya lakho ngocingo lwantlandlolo.
Ikati enekhadibhodi yekhadibhodi
Kwisifundo sanamhlanje siza kwenza ubugcisa bokuba sifuna kuphela ityhubhu yekhadibhodi kwaye siya kuba nomfanekiso ohlekisayo ngokumila kwekati.
Izithsaba zekhadibhodi zeroli zasekhitshini kunye nephepha langasese
Izithsaba zekhadibhodi ezirisayikilisha imiqulu yamaphepha asekhitshini kunye nephepha langasese, sinokubenza badlale okanye bavuselele umbhiyozo wethu wokuzalwa.
Izindlu zeentaka ezenziwe ngeebhokisi zeebisi.
Izindlu zeentaka ezenziwe ngeebhokisi zeebisi, akukho nto ibhetele ukuphinda isetyenziswe kwakhona. Abantwana baya kuzithanda izindlu zeentaka ezenziwe kwiibhokisi.
Iimpawu zesipho zoqobo
I-DIY ngendlela yokwenza iilebheli ezilula zohlobo lwekawaii zokuhamba nezipho.
ISanta Claus umnini welaphu
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza umnini omhle we-napkin kaSanta Claus ngephepha. Isizathu seKrisimesi kwisidlo sangokuhlwa seKrisimesi.
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza i-binoculars evuselelayo yabantwana eyenziwe ngekhadibhodi kwaye ihonjiswe nge-washi tape.
Iibhaskithi ezineepleyiti zekhadibhodi
Kweli nqaku sibonisa indlela entle kakhulu yokubeka iziqhamo, kunye neepleyiti ezimbalwa ezimhlophe zekhadibhodi zokwenza iibhasikiti zoqobo.
Kweli nqaku sikubonisa ezinye zeekomityi ezintle ezinamaphepha okwenza iti emnandi esetelwe ukuba wonke umntu adlale njengentsapho.
Amathambo eHalloween aneepleyiti zekhadibhodi
Kule nqaku sikufundisa indlela yokwenza amathambo epati yeHalloween kunye neepleyiti ezilula zeplastiki. Thatha ithuba lokucinga kwakho.
Kweli nqaku sikubonisa ukuba ungayenza njani ibhasikithi yekhadibhodi eyonwabisayo yeebhayisekile zabantwana, ukuze bakwazi ukuthatha izinto zabo ukuya epakini.
DIY: Ikati ikrwela iposti
Kule nqaku sikubonisa ukuba ungayenza njani into enomdla wokukrwela iikati. Isixhobo esibalulekileyo ekhaya apho kukho izilwanyana zasekhaya ezinezipikili ezibukhali.
Bonisa izacholo zomqala ezenziwe ngekhadibhodi
I-DIY ebonisa indlela yokwenza umqala wethu ubonise uqoqosho kakhulu kwaye ngexesha elifutshane kakhulu.
I-DIY: Ukupeyinta okwenziwe ngokobuqu ngamagqabi aphakamileyo
Kule nqaku sikubonisa ibhokisi yekhadibhodi esebenzayo eyenziwe ngamagqabi eentyatyambo ukuhombisa igumbi lelona lincinci endlwini.
Ibhokisi yekhadibhodi yobucwebe enemibala enemibala, ukugcina iigugu zokuqala
Kule nqaku sikubonisa ukuba ungazenza njani iivenkile ezintle ezincinci ukuze amantombazana aqale ukugcina iigugu zawo zokuqala: amakhonkco, amacici ...
Inqaku le-DIY lendlela yokwenza ibhokisi yesipho. Umbono ogqibeleleyo ngeKrisimesi, imihla yokuzalwa okanye naluphi na uhlobo lokubhiyozela.
Kule nqaku sikubonisa ukuba ungayenza njani iphaphethi entle yebali labantwana 'iPuss kwiibhutsi'. Yiyo loo nto sizisa abantwana kwimidlalo yeqonga nasekufundeni.
Isiqalo seembadada esenziwe nguwe
Kule nqaku sikubonisa ukuba ungazicwangcisa njani zonke izihlangu zakho kwirock yezihlangu ezinomdla ezenziwe nguwe. Joyina i-DIY!
Gitare zekhadibhodi, ukuseta imood
Kweli nqaku sikubonisa ukuba wenze njani iigitare zekhadibhodi ezipholileyo, ukuze umntwana onwabe ngathi wenza ukuba umculo uphume kwikatala yakhe.
Iimoto ezinemiqulu yamaphepha, zilungile ukonwabisa incinci
Kule nqaku sikubonisa ukuba ungazenza njani iimoto ezibalekayo ngokuqengqeleka okulula kwephepha langasese.
Ukuphinda kusetyenziswe kwakhona: Iincukuthu kunye neeBhokisi zeqanda
Namhlanje kwezobugcisa siza kwenza iithoyi zokurisayikilisha. Ngale nto siza kusebenzisa ibhokisi yamaqanda.
Isifundo sekhadi lomthi weKrisimesi
izifuba ezenziwe ngekhadibhodi, ngaphakathi kwaye zihonjisiwe ukubeka ubucwebe.